Igciwane le-Corona lisusa isinkwa etafuleni - Vernac News
Ukubheduka kwegciwane leCorona sekushiye amazwe amaningi ekhungathekile, futhi nezibalo zabantu asebeshonile ziyashaqisa impela. Izwe lethu nalo selibhekene nalo mbulalazwe, kunjalo-nje izibalo zikhuphuka ngesivinini esiphezulu, okwenza uMzansi ube yizwe elihamba phambili e-Africa yonke ngabantu abatholakale baphethwe yiCoronaVirus. Izibalo zifinyelele ngaphezu kuka-1000 esikhathini esingamaviki amabili. Kuyiqiniso ukuthi leli gciwane alidle nkobe zamuntu, amakhulu ngamakhulu abantu ayabhubha zinsuku zonke emazweni aphesheya, yingakho uhlelo leLockdown luvela njengendlela encono yokunqanda ukubhebhetheka. Noma kunjalo, ukuzivalela ezindlini kuletha uvalo nokukhathazeka kubantu abaningi.
Abahlali baseNingizimu Afrika sebezithola bebhekene nesimo sokuzivalela/ukugoya, phecelezi i-LOCKDOWN, izinsuku ezingamashumi amabili nanye (21). Uhlelo leLockdown luchaza ukuthi akekho umuntu ovunyelwe ukuphumela phandle, kuze kuphele izinsuku ezingu-21. Lesi simemezelo sikaMongameli uCyril Ramaphosa siza emva kokwanda kwezibalo zabantu asebethole igciwane le-Corona, iCOVID-19. Lesi yisimemezelo sesibili esikhathini esingaphansi kwamaviki amabili. Kwesokuqala, uMongameli wacacisa ukuthi iNingizimu Afrika ibhekane nenkinga, wavala izikole, imicimbi emikhulu efaka phakathi iPhasika (Good Friday) kanye nokudibana kwabantu abangaphezu kwekhulu (100). Miningana imigomo nemibandela ebekiwe, futhi okumele izakhamuzi zakuleli ziyilandele ukuze zigweme ukutheleleka nokubhebhethekisa leli gciwane. Ukugeza izandla kugcizeleliwe kakhulu, kanye nokugwema ukuzithinta ubuso.
Kusobala ukuthi miningi imikhakha nabantu abazochaphazeleka ngokuqhubeka kweCOVID-19, empeleni-nje, wonke umuntu uyatheleleka. Abanye osomabhizinisi nosaziwayo sebezwakalise ilaka labo ngalesi simo, beveza umthelela ongemuhle ozoshiwa yileli gciwane. Iningi labantu, ikakhulukazi abaNsundu, bazolahlekelwa yisinkwa sabo semihla ngemihla. Nemboni yezikaqedisizungu iyathinteka kakhulu. Lapha singabala amaciko; abaculi, izimbongi, abalingisi, njalonjalo. Iningi lalaba bantu bancike emicimbini ukuze babeke isinkwa etafuleni, imicimbi leyo okusazothatha isikhathi ukuba iphinde ihlelwe futhi njengoba umhlaba wonke usabhekane negciwane. Umkhakha wonke wezomculo uzokhahlamezela impela, ikakhulukazi njengoba kungaziwa ukuthi lizotholakala nini ikhambi lokulapha igciwane leCorona. Sikhulu isibalo sentsha engasebenzi lapha eMzansi, futhi abanye babo bancike kulomkhakha ukuze baphile.
Kusobala ukuthi iningi lamaciko likhathazekile, futhi lihlalele ovalweni njengoba kungaziwa ukuthi lesi simo sizothatha isikhathi esingakanani. Kodwa-ke, uhulumeni uthembise ukunxephezela amaciko ngesikhwama esibekelwe ukusiza ngezinhlekelele. Into ekhathaza abaningi eyokuthi bangaki abazohlomula kulesi sikhwama, nokuthi umuntu ngamunye uzothola malini. Impela iCOVID-19 izoshiya umthelela ongemuhle emnothweni nasezimpilweni zabaningi. Ayilethi nje uvalo lokutheleleka, kodwa iphinde yenze izindlela zokuphila kwabantu zime nsi. Lokhu kufakazelwe nayindlela abanye osaziwayo ebebephawula ngayo ezinkundleni zokuxhumana, bebekhathazekile emiphefumulweni. Ukungaqhubeki kwemisebenzi yamaciko kuzochaphazela nemindeni yabo, njengoba bephilisa bephinde bekhulise imindeni ngamakhono abo. Kunovalo lokuthi kweminye imizi ikati lizolala eziko uma isimo siqhubeka nokuba bucayi.
Hamilton “Hemiy” Msawenkosi Mnguni is a rapper, poet and writer/freelancer from Frankfort, Freestate. Hemiy is an outgoing male who was originally born in Newcastle (KZN), before relocating to Frankfort. He completed his high school in Nqutu (KZN), then went to the University of Cape Town for tertiary education.